Alatsinainy, 3 Jona, 2013 Alakamisy Oktobra Oktobra 1, 2020 Douglas Karr
Meltwater dia manome vokatra mahomby vokarin'ny vokatra Sehatra Marketing Media Sosialy malaza eran-tany izany, indrindra eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny daholobe.
Mamboly fiarahamonina matanjaka ara-tsosialy matanjaka miaraka amin'ny vahaolana momba ny haino aman-jery sosialy Meltwater hananganana marika, hikolokoloana ireo mpisolovava ary hitondra vola. Ny vahaolana marketing amin'ny media sosialy Meltwater dia manambatra ny fanaraha-maso ny media sosialy lalina sy Analytics miaraka amin'ny firosoana ara-tsosialy mahomby mba hanampiana anao hamorona fanentanana amin'ny marketing mahomby kokoa ary hanorina fifandraisana lalindalina kokoa amin'ireo vondrom-piarahamonina marobe mba handefa ROI media sosialy tena izy.
Endri-javatra araka ny voalaza ao amin'ny tranokala Meltwater:
Vahaolana fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy - Mahazoa hevi-baovao avy amin'ny media sosialy momba ny fampiroboroboana ny orinasanao miaraka amin'ny vahaolana fanaraha-maso media sosialy Meltwater. Fantaro ny fironana azonao ampiasaina amin'ny fampielezana haino aman-jery sosialy. Fantaro ny loharanon'ny hevitra ara-tsosialy hanatsarana ny fanentanana ny influencer. Hadihadio ny fihetseham-po ao ambadiky ny fanehoan-kevitra ara-tsosialy mba hanitsiana ny feon'ny atiny marketing anao. Ataovy lasibatra ny varotrao media sosialy izay mety hahitana ny hafatry ny orinasanao. Ny vahaolana amin'ny fanaraha-maso ny media sosialy Meltwater dia manampy anao hanala ny tabataba, amin'izay ianao afaka mifantoka amin'ny resaka ara-tsosialy manome ny fahitana ara-barotra sy ny fotoana tena mety.
Paikadin'ny media sosialy - Ampitomboy ny ROI haino aman-jery sosialy amin'ny alàlan'ny fametrahana ny paikadinao amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fomba fijery lalina momba ny orinasa. Fantaro ny filan'ny mpihaino kendrenao amin'ny fanaraha-maso ny media sosialy. Avereno jerena ny fanehoan-kevitra momba ny fiaraha-monina mba hahitanao ny fahaizanao sy ireo mpifaninana aminao miatrika ireo filàna ireo. Fakafakao ny fantsona media sosialy ampiasain'ny mpihaino kendrenao indrindra rehefa miresaka momba ny vokatrao hampitomboana ny fitaomana eo amin'ny fiaraha-monina. Manamboara paikadin'ny media sosialy izay taratry ny fanavahana anao lehibe miaraka amin'ny vahaolana momba ny varotra media sosialy Meltwater hampitomboana ny ROI amin'ny fampielezana haino aman-jery sosialy.
Vahaolana fampiroboroboana ny media sosialy - Manentana ny fidiran'ny haino aman-jery sosialy lalindalina kokoa hanentanana ny fisoloana vava amin'ny marika. Ny fahombiazan'ny haino aman-jery sosialy dia miorina amin'ny fidirana amin'ny media sosialy. Tsy toy ny dokam-barotra amin'ny haino aman-jery sy ny marketing mivantana, tsy ampy ny manomana izay holazainao sy hataonao, mila maminavina izay holazain'ny vondrom-piarahamoninao sosialy ianao ary hizara. Tsy maintsy manentana ny fidiran'ny haino aman-jery sosialy ianao. Hamafiso ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina amin'ny alalàn'ny tena manokana amin'ny anaran'ny marikao. Ataovy ho mpanjifa sy mpanjifa ny resadresaka amin'ny alàlan'ny firotsahana anaty haino aman-jery sosialy.
Media sosialy Analytics - Fandrefesana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy miaraka amin'ny media sosialy Meltwater Analytics vahaolana. Ny tsindry sy ny mpanaraka dia tsy manondro ny lanjan'orinasa amin'ny fampielezana haino aman-jery sosialy. Haino aman-jery sosialy Meltwater Analytics ny vahaolana dia manampy anao hahafantatra ny fiantraikan'ny fampielezankevitra anao amin'ny resaka ara-tsosialy sy ny fandikana ireo resaka ireo ho tena lanja amin'ny orinasa. Asehoy ny fomba famenon'ny marketing media sosialy ny ezaka ara-barotra mahazatra. Mandraisa fanapahan-kevitra mifototra amin'ny zava-misy hanatsarana ny famerenam-bola amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny famakafakana media sosialy tsara kokoa.
Tags: rano mitsonikameltwater buzzfanadihadiana amin'ny media sosialyfifandraisan'ny media sosialyvahaolana ara-barotra amin'ny media sosialyfanaraha-maso ny media sosialyTetikasan'ny media sosialy